တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ် PCB, Excellent က PCB ထုတ်လုပ်တဲ့, PCB ဘုတ်အဖွဲ့, professional က PCB
စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2002 ရှန်ကျန်းအတွက်, တစ်ဦး professio အဖြစ်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကစားထားပြီး ...
circuit board ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အများအပြားအကြီးစားလျှပ်စစ်အဓိကအလုပ်များကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ...
မှတ်ယူ, လူတိုင်း circuit ကိုပျဉ်ပြားနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်, ဆားကစ်ဘုတ် ...
Shenzhen WMD Circuits, Ltd.စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2002, လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအမြင့်ဆုံးတိကျစွာ PCBs အမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကစားထားပြီး. အဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည် 3, Lisheng စက်မှုပန်းခြံ, Qiaotang လမ်း, Fuyong မြို့, Baoan ခရိုင်,ရှန်ကျန်းနှင့်တစ်ဦးဧရိယာကိုဖုံးအုပ်ထား 8000 စတုရန်းမီတာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံထက်ပိုမိုထုတ်လုပ် 180,000 PCBs ၏စတုရန်းမီတာနှစ်စဉ်. ကျနော်တို့ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အသေးစား-to-အလတ်စားအသံအတိုးအကျယ်အလုပ်အကိုင်များအာရုံစိုက်. သုတေသနအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏မွမ်းမံမှုစနစ်, ကျနော်တို့ PCB ၏လယ်ပြင်တွင်အသံဂုဏ်သတင်းကိုခံစားခဲ့ကြ, ပြင်းထန်သောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူယနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာထွက်မတ်တပ်ရပ်.
WMD ISO9001 လေပြီ, ISO14001, SGS နှင့် ul လက်မှတ်များ. ကျနော်တို့ထိပ်တန်းအရည်အသွေးထုတ်လုပ်ရန် State-Of-The-Art လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများနည်းပညာကိုအသုံးချရန်နှင့် 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသော PCBs. Multilayer ဘုတ်အဖွဲ့အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်, မြင့်မားသော TG ဘုတ်အဖွဲ့, ထူသောကြေးနီဘုတ်အဖွဲ့, high-တိ(ရော်ဂျာ), AL-အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပျဉ်ပြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အများအားဖြင့်အသုံးပြုအဖြစ်ဘုံများတွင်အသုံးပြုကြသည်, စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ်, ကွန်ပျူတာလျှောက်လွှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, စမ်းသပ်မှုတူရိယာ, စစ်ရေး, နှင့် functional ဖြစ်စေစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကို၌ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုများ.
16 မြင့်မားသောတိကျ PCBs အပေါ်နှစ်က
impedance ထိန်းချုပ်ရေး PCB
အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, နေသမျှကာလပတ်လုံးကဖိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်, အများဆုံးအင်ဂျင်နီယာများ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင်တွေဒီဇိုင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုမပို့လေ့ရှိပါသည် ....
Shenzhen WMD Circuits, Ltd. တစ်ဦး pcb ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်. အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများမှတဆင့်-အပေါက်ကို double-တဖက်သတ် pcb circuit ကိုပျဉ်ပြားပါဝင်သည်, High-အလွှာပေါင်းစုံအလွှာတိကျစွာဆားကစ်ဘုတ်,...
pcb ဘုတ်အဖွဲ့အထောက်အထားများတွင်အသုံးပြုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားကြသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး. ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဓာတု, ငွေယူပြီး, ယင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် ....